Fandrobana teny Ilanivato Lehilahy iray maty, zaza roa voatifitra
Nisehoana fanafihana andro mazava be teny amin-dry masera etsy Ilanivato Anosipatrana omaly manodidina ny tamin’ny 7ora sy sasany maraina.
Teo akaikin’ny vavahadin’ny sekolin-dry masera, no niseho ny fanafihana ka Raim-pianakaviana, mpanao « cash point » handeha hanatitra ny zanany hianatra sady hiasa maraina no notifin’ireo olon-dratsy tsy nisaron-tava miisa telo nitondra moto scooter. Voa vokatr’izany ity farany, bala niainga teo amin’ny sandriny, niazo ny fony no antony nahafaty azy. Nolalovan’ny bala koa teo amin’ny takolak’ilay zaza, zanak’ilay voatafika izay mpianatry ny kôlejy « La Réussite », izay mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly. Lasan’ireo nahavanon-doza nandritra izany ny finday miisa efatra sy kahie tao anaty sakôsy, raha lasan’ireo olona tsy fantatra izay nibatabata ny razana, hoy ny fianakavian’ny maty ny lela-bola 8 tapitrisa Ar tao anatin’ny sac banane, teny am-balahan’Itompokolahy. Niparitaka noho ny tahotra ny mpandalo sy ireo mpanatitra mpianatra amin’ny sekoly manodidina. Henjana ny loharanom-baovaon’ireo olon-dratsy ankoatra ny fitaovam-piadiana hary fomba. Andro mazava be ny fanafihana ary tena sahy ireo jiolahy izay fantatra fa niaraka tamin’ny PA. Izay manelingelina tonga dia norarafany tifitra, hany ka miforitra ny olona, ary malalaka ny làlana fitsoahana. Mpianatry ry masera antsoina hoe : Henintsoa ihany koa moa no voatifitra teo amin’ny tongony ary mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hôpitaly HJRA hatramin’ny omaly.
Tsy maintsy asiana laharana ny scooter
Tonga teny Ilanivato ny mpitandro filaminana omaly manoloana io tranga io, saingy efa tsy hita popoka fa efa nadio ny rano nitan’ireo jiolahy. Araka ny baiko nomen’ny Praiminisitra kosa dia tsy maintsy hasiana laharana avokoa manomboka omaly ireo “moto scooter” satria ireny matetika no entin'ny jiolahy eto an-drenivohitra manao asa ratsy. Tena nirarakopana ny fanafihana mitam-piadiana, ka saiky ireny fitaovana ireny hatrany no nampiasain’ireo jiolahy tamin’ny fitsoahana. Tsiahivina moa fa bevohokabe efa miandry andro tokony ho teraka tamin’ny herinandro ny vadin’Itompokolahy.